မိုးမခ ၀ိုင်းတော်သားများ၊ မိတ်ဆွေများနဲ့ ချစ်သူများ | MoeMaKa Burmese News & Media
>Guns and Burmese
>Kyaw Thu Moe Myint - 62 Years of Anniversaries
စာစောင် နှင့် ဒီဇိုင်း – ကိုဦး၊ မသန္တာ (၂ဝဝ၅)၊ အောင်ထက် (၂၀၁၀)၊ နှင်းဆီဖြူစာပေတိုက် (၂၀၁၅)၊ မိုးZ (၂၀၁၆)၊ မြတ်မင်း (၂၀၁၇)
ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄
မောင်မောင်စိုး၊ ဗိုလ်ထက်မင်း၊ လှကျော်ဇော၊ ၀င်းအောင်ကြီး၊ စံလှကြီး
မင်းခိုင်၊ ဒီဇိုင်း – မိုးZ၊ ဌေးအောင်၊ ခိုင်ကြည်သစ်၊ ကမ်လူဝေး၊ လင်းသက်ငြိမ်၊ ကာတွန်းအောင်မော်၊ KT#၊ ခင်လေး၊
အောင်မော်ဦး၊ ဒီဇိုင်း မြမင်း၊ ဆိပ်ကမ်းသာ
8 Responses to မိုးမခ ၀ိုင်းတော်သားများ၊ မိတ်ဆွေများနဲ့ ချစ်သူများ
ထက်ဝေး on June 6, 2012 at 3:29 pm
ကျွန်တော် စာမူပို့ ချင်ပါတယ် ဘယ်လို ပို့ပေးရမလဲ လမ်းညွှန်ပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်
admin on June 7, 2012 at 4:44 am
myozawlin on August 10, 2012 at 10:59 am
ywinphyo on August 28, 2012 at 10:38 pm
ywinphyo on August 27,2012 at 10:36 PM
စာပို့ချင်လို့ ဘယ်လိုပို့ရမလဲ gmail လိပ်စာရှိရင်ပြောပြပေးပါ။
မိုးဦးထွန်း on September 23, 2012 at 5:28 pm
စာမူပို့ခြင်ရင် ဘယ်လိုပို့ပေးလို့ရနိုင်မလဲ။ Email ကနေ တဆင့်ပို့ပေးလို့ရမယ်ဆိုရင် Email address သိခြင်ပါတယ်။
Thu Zaw on September 23, 2012 at 7:33 pm
Dear Moemaka Editors,
I’ve sent the news regarding the Ministry of Construction on 22nd Sep 2012.
I just would like to know the status that whether the Moemaka is post this news.
I would appreciate if you could assists to post this news in the Moemaka site as soon as possible.
Kinldy let me know if the Moemaka is unable to post this news.
Hope to read this news in the Moemaka site soon.
Pls do not hesitate to contact me via email if you need further info about the Ministry of Construction.
I’ll send to you more detail about Ministry of Construction soon.
admin on December 7, 2012 at 12:54 pm
to send news & articles, please send to editors@ moemaka.com
gmail – moemaka.com@gmail.com
ko lwin on December 29, 2013 at 3:04 am